Mgbakọ na nyocha nke ngwa obibi 3D na Kit BQ Hephestos | Akụrụngwa n'efu
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe dị adị ahụmịhe anyị na-arịgo ngwa nbipute 3D na Kit BQ HEPHESTOS. Onye nbipute a nke onye nrụpụta gosipụtara na njedebe nke 2016 bụ nyochagharị nke ụdị ọ wepụtara na 2014. Ọ bụ ezie na ọ na-aga n'ihu na-esite n'ike mmụọ nsọ site na ihe atụ sitere na obodo RepRap gụnyere elektrọnik arụpụtara na e site BQ na imewe nke akụkụ niile gụnyere ka edegharịrị iji melite nkwụsi ike na nkenke na mbipụta.
Mgbe anyị lechara ọtụtụ oge nke McGyver iji kpalie onwe anyị, anyị nwere obi ike ịrịgo onye nbipute na Kit ma anyị ga-akọwa ntutu, ihe ịrịba ama na nchịkọta vidiyo nke nzukọ otu ahụmahụ si dị.
2 Unboxing na nzukọ nke 3D ngwa nbipute na Kit BQ Hephestos
2.1 BQ choro igbanwe ihe eji ebi KIT dika Ikea gbanwere oche
2.2 Oge ejiri mee mgbakọ
2.3 Ọkwa na-ewu n'elu ikpo okwu
3 Akụkụ teknụzụ na nkọwa nke ihe nbipute 3D na Kit BQ Hephestos
4 Akụkụ ndị ọzọ
5 Bybọchị site na iji 3D ebi na Kit BQ Hephestos
6 Otu ndi ahuru n'anya na ndi kere obodo
7.1 Ọnụahịa na nkesa
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na kemgbe mmalite nke azụmahịa ya, ọtụtụ ndozi apụtawo na ahịa nke ụdị BQ adịghị etinye, Mbelata na RRP n'oge na-adịbeghị anya na-etinye otu a na ntanetị. Ọ bụrụ na anyị abawanye mmefu ego anyị, anyị nwere ike ị nweta ụdị nke gụnyere akwa na-ewe iwe ma anyị nwekwara nyochaa na blog a ma ọ bụ na anyị nwere ike ịzụta nkwalite "kpụ ọkụ n'ọnụ akwa" na BQ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ ya.
Unboxing na nzukọ nke 3D ngwa nbipute na Kit BQ Hephestos
N'adịghị ka isiokwu ndị ọzọ nke anyị tụlere ndị na-ebi akwụkwọ. Tupu ịmalite nyochaa njirimara ọrụaka nke akụrụngwa ahụ, anyị ga-elekwasị anya na ịkọwapụta ahụmịhe nke ịgbakọta ngwa nbipute ahụ.
BQ choro igbanwe ihe eji ebi KIT dika Ikea gbanwere oche
Na ngwa nbipute-abịa juru n'ọnụ na kọmpat na mfe ibufe ngwugwu site na azụmahịa ọ bụla. Ọ bụ otu ndị anyị nwere ike ịchọta ngwa ngwa na ụlọ ahịa na ụlọ ahịa eletrọniki, anyị ga-enwe ike inweta ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'obodo ọ bụla na mba anyị na-enweghị ịga ụlọ ahịa pụrụ iche nke nwere ike isiri ike ịchọta. Ọ bụkwa ihe atụ na-ere ahịa n'ịntanetị site na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama na ama ama.
Mgbe anyị meghere igbe anyị hụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Iberibe iberibe haziri na ala 2. The n'anya nke ukwuu n'ụzọ zuru okè nyere mpempe bụ bit na-eyi egwu, ma anyị ngwa ngwa emi odude manual na anyị na-ahụ na onye ọ bụla nzọụkwụ ọ bụ n'ụzọ zuru okè zuru ezu nke iberibe iji na ndị a na-zuru oke ọnụ nke mere na ọ dịghị ihe mgbagwoju anya. Ọ na-echetara anyị (savingchekwa ebe di anya) gaa na ntuziaka ichikota oche nke Ikea.
Ujo nke abuo bu mgbe anyi meghere igbe nke nwere ihe ngwaike nile, ego nkpuru nkpuru osisi na bolts nke anyi g’eji mecha buru oke. Na ntuziaka a na-etinye template na mkpụrụ ndụ niile na bolts maka njirimara ngwa ngwa. N'echiche a, ọ ga-aba ezigbo uru ma ọ bụrụ na edere akpa ndị ụdị ọ bụla kewara.
Ngwa, ka anyị rụọ ọrụ, nke a bụ njikọ nke vidiyo ka ị nwee ike nweta echiche maka onwe gị ihe ọ na-efu dị ka m iji kpokọta otu kit dị ka nke a:
Na nzukọ anyị ahụla ụfọdụ obere nsogbu anyị nwere ike idozi na ijiji. Anyị na-akọwa ha n'okpuru:
Offọdụ akụkụ ndị e biri ebi anaghị adaba na milimita n’ogwe osisi na ihe ndị yiri ya na anyị ga-eme ụfọdụ ike. Nke a nwere ihe ize ndụ nke akụkụ ndị a e biri ebi na-agbaji.
Ọtụtụ mpempe akwụkwọ nwere oghere ị kwesịrị dabara mkpụrụ iji a soldering ígwè. Site na nkọwa a anyị ahụbeghị akwụkwọ ọ bụla na akwụkwọ ntuziaka ndị nrụpụta. Mana ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhụ aha na vidiyo ndị nrụpụta nwere n'ọnụ ụzọ DIWO
Ngwa ahụ gụnyere igodo Allen niile dị mkpa maka nzukọ na ntanetị. Mgbe ha jiri isi ike pịakọta ọnụ anyị ga-achọ 2 wrenches.
Mkpụrụ ndị jikọtara kwụ na vetikal na-arị elu enweghị ike ịmachi ya na spana gụnyere na igbe ahụ. Anyi choro nke ka uku.
El ngosi ngosi ka kọmputa bụ kọwara n'ụzọ mgbagwoju anya na ntuziaka. Anyị kwesịrị ijikọ ya n'ụzọ ọzọ dịka ọ dị anyị ka ọ na-egosi na akwụkwọ ntuziaka. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji njikọ nke na-enye ya ohere iji ya mee ihe ziri ezi.
The HotEnd n'echebe bụ impractical na manụ mgbe eji na ngwa nbipute, anyị mechara wepụ ya.
El A na-esezi vetikal vetikal na ụda isi awọ. N’akụkụ ụfọdụ ị nwere ike ịpị agba n’etinyeghị Mbipụta ahụ n’ụzọ ọ bụla.
Oge ejiri mee mgbakọ
Anyị ejirila Oge 3 dị ihe dị ka awa 2 na ọkara. Anyị agaala nwayọ, na-elele usoro ọ bụla ma na-achọpụta na ndekọ nke usoro ahụ anaghị akwụsị. Na mkpokọta okwu nke mgbakọ ọ dị anyị mfe ma ogologo. Akwụkwọ ntuziaka a kọwara nke ọma, na onye nrụpụta nwekwara mkpokọta vidiyo nke vidiyo nke kọwapụtara usoro niile.
Na ọkwa nhazi, setịpụrụ dị ka ezigbo otu, belụsọ maka njedebe nke agbụrụ. Ozugbo anyị chịkọtara akụrụngwa ahụ, anaghị emegharị ha, anyị ga-amata na mgbe ha na-ejikwa ngwa ahụ, ha anaghị akpali anyị.
Ọkwa na-ewu n'elu ikpo okwu
Mbipụta isi na-agbaji na isi ihe anọ site na kposara anọ, a na-atụ aro ka ị dozie ya ugboro abụọ n'usoro tupu ịmalite ibipụta.
El BQ anaghị ere kit mmelite nke nhazi onweAgbanyeghị, na ọgbakọ a enyerela ọtụtụ ndị ọrụ aka ịgbanwee ngwa ngwa iji ihe ndị dị mkpa iji mejuputa ọrụ a.
Akụkụ teknụzụ na nkọwa nke ihe nbipute 3D na Kit BQ Hephestos
Onye nbipute bụ ihe nlere na arụmọrụ dị mma yana nke ahụ amaala etu esi eto afọ n'ụzọ ziri ezi. Nwere mkpebi nke 60 micron Z oyi akwa yiri ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ taa ma zuru ezu maka ọtụtụ ọrụ obibi akwụkwọ anyị nwere ike ịrụ. Site na itinye a ígwè etiti arọ ya dịtụ elu karịa ndị ọzọ na-ebi akwụkwọ yiri nke a, agbanyeghị 13 n'arọ Ọ bụghị ibu ibu gabiga ókè ma ọ ga-enye anyị ohere ịkwaga ya nke ọma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ya.
El Mpaghara 215x200x180 Odabara ka kacha Mbipụta, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ ya anyị nwere ike inweta a nabatara umu isi.
La ebipụta ọsọ bụ 100mm / s nwetụrụ nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere ọsọ nke ndị na-ebi akwụkwọ n’oge a.
Ihe ntanye ahụ eji na ngwa nbipute a ga-enye anyị ohere iji filament PLA na ihe yiri ya dị ka osisi ma ọ bụ filaments ọla. Ọ na-aza nke ọma na-agbanwe filaments ma anyị enweghị ike iji filaments na elu fusing okpomọkụ ma ọ bụ adhesion na-adịghị mma, ebe ọ bụ na ngwa nbipute agunyeghi akwa di oku. Ma akwa dị ọkụ na onye na-ewepụta ihe ọhụrụ BQ Hephestos 2 na-ebi akwụkwọ bụ ngwa anyị nwere ike ịzụta iche iche.
El extrusion cart nwere kọmpat anya ọ bụ ezie na njikọta wiwi niile buru ibu ma dịkwa n’otu ebe. Na X axis eriri jikọtara ya na adighi agbapu n'oge obula.
Dị ka ọ dị na ndị na-ebi akwụkwọ ndị ọzọ anyị nyochara na mbụ anyị na-atụ uche mgba ọkụ ON / Gbanyụọ. Dị ka ihe ngwọta na-adịru nwa oge, anyị nwere ike ịkwụpụ eriri USB site na ike mpụga dị ka ọ nwere nnukwu ụlọ siri ike.
Nke a bụ onye nbipute nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma site na ibipụta site na SD ma ọ bụ jikọọ na PC site na eriri USB. N'ọnọdụ abụọ ọ na-arụ ọrụ ya n'ụzọ zuru oke. Ọ bụrụ na anyị chọrọ otu ndị nwere wifi njikọta anyị nwere ike ịme obere ego itinye ego ma wụnye sava Octoprint na Utu Pi 3 (ụdị nke gụnyere wifi dị ka ọkọlọtọ). Anyị anwalela ya ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke.
Iji laminate ihe ndị ahụ anyị ejirila CURA, Mmemme anyị bụ nnọọ Fans nke na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na a na ngwa nbipute. Mgbe ahụ, anyị ga-echekwa faịlụ GCODE na atụmatụ anyị na kaadị SD nke anyị tinyere n'ime ngwa nbipute. Kit anaghị agụnye kaadị SD ọ bụla
Ejikọtara onye na-agụ kaadi SD na ngosipụta ma dị n'elu nke ngwa nbipute na-eme ka ọ dị mfe ijikọ ma kwụpụ kaadị. Na ngosi gosipụtara ezigbo mma mana o juru anyị anya na igwe na-achịkwa ejighị mkpịsị plastik bịa.
Bybọchị site na iji 3D ebi na Kit BQ Hephestos
Ngosipụta nke onye nbipute na-egosi anyị ozi na ọkwa nke mbipụta ahụ, dịka ọ dị n'oge gara aga anyị na-atụ uche ịhụ oge fọdụrụ iji rụchaa ọrụ ahụ. Ọ bụghị onye na-ebi akwụkwọ na-eme mkpọtụ, n'ihi ya, anyị nwere ike ịrụ ọrụ n'otu ọnụ ụlọ ahụ akụrụngwa na-etinyeghị ahụike ọgụgụ isi anyị n'ihe egwu.
Mbipụta nwere a ezigbo mma na ezi ntụkwasị obi na-nọgidere na-enwe ma obere njehie ọnụego mpempe mgbe ibe.
Mgbe anyị bipụtara ihe karịrị iri atọ iberibe anyị enyochala mkpụrụ na ịlụ niile na-enweghị ịchọta Onweghi ihe mebiri ma ọ bụ mebie site na iji ihe anyị mebere ngwa ọrụ ahụ.
Otu ndi ahuru n'anya na ndi kere obodo
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime akụkụ ndị masịrị anyị nke ukwuu banyere ìgwè a bụ nnukwu ozi, mgbanwe na enyemaka na anyị nwere ike ịchọta ntanetị ebum n’uche imezi ihe obibi akwụkwọ a.
Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka onye nbipute anyị wee gbanwee iji melite arụmọrụ ya. Site na ihe mmetụta nke onwe iji meziwanye ihe na-arị elu iji nye ọgbakọ ahụ nkwụsi ike. Ebe ọ bụla ọ dakwasịrị anyị ile anya, anyị ga-achọta ozi gbasara onye nbipute ahụ; Ihe na-efu , ke ukara forums na Youtube …. N'agbanyeghị ebe anyị lere anya, anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị ọrụ na akụrụngwa a. N'ihi ewu ewu na nke a na ngwa nbipute anyị ga-abụ nnọọ fdị mfe ịchọta mgbanwe dị iche iche nwalere site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-eme ya.
Anyị ebipụtawo ma gbakọta ọtụtụ mgbanwe na PLA nke mere ka anyị nwee ike imeziwanye ọdịdị nke akụrụngwa. Anyị agbanweela ọfịs ụlọ ọrụ anyị ụfọdụ akụkụ ndị ezubere iji jide iko ahụ on nke anyị na-ebipụta, anyị kwukwara a ndu maka filament, anyị webatara a bọtịnụ na akara ngosi na anyị ka mma ihe nkwado nke mkpara ndị na-ahụ maka mmegharị ahụ na ọnọdụ Z.
Anyị na-ezube ibipụta igbe iji gosipụta ihe ngosi ahụ ma gbakwunye nkwado maka kamera weebụ. Na Octoprint anyị nwere ike itinye iyi nwere ụfọdụ ụdị kamera ụfọdụ ma nyochaa mmetụta anyị ma anyị nọ n'akụkụ onye nbipute ma ọ bụ ọtụtụ kilomita.
Ọ bụ eziokwu na ekpughere ịdị mfe nke ihe nlereanya ahụ mgbe a na-enyocha ụfọdụ njirimara ọrụaka, onye nbipute 3D na KIT BQ Hephestos bụ ọmarịcha nhọrọ iji gosi onwe anyị na ụwa nke mbipụta 3D. N'otu aka anyị nwere otu egwuregwu nwere ezigbo ọdịnaya nke ahụ ga-enyere anyị aka ịmalite ibipụta akwụkwọ n’enweghi nnukwu ego. N'aka nke ọzọ, ịbụ onye 3D ngwa nbipute tan ewu ewu Enwere ike ịchọta nsogbu ọ bụla anyị nwere na ngwa nbipute edozi n’otu ọgbakọ ma ọ bụ ọzọ. Tụkwasị na nke a, ìgwè ahụ nwere nhọrọ ịgbasawanye nke ga-eme ka anyị nwee ike ịgbanwe ma melite na ọkara oge. Anyị chọrọ BQ ịzụlite a ọhụrụ ampiation gaa na-agụnye ekwe omume nke nhazi onwe. Nke a ga - abụ ụzọ dị mfe iji melite ma mekwuo ahụmịhe onye ọrụ
Ọnụahịa na nkesa
Ọ bụ ngwa a ma ama nke anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa ọ bụla. Mgbe nyochaa nke RRP na nso nso a, anyị nwere ike nweta onye nbipute a maka a ego nke € 499
Otu nwere nkwado dị ukwuu site na obodo ndị rụrụ ya
Ngwa na-adị mfe ịchọta n’ụlọ ahịa
Kwekọrọ n'Ozizi na Octoprint
A ghaghi itinye mkpụrụ dị na akụkụ ahụ na ígwè na-ere ọkụ
Agunyeghi akwa di oku
Agunyeghi itinye onwe gi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Mgbakọ na nyocha nke ngwa obibi 3D na Kit BQ Hephestos
Ihe ịma aka PC, nsogbu ọhụrụ nke Raspberry Pi